करण चौधरीले घोषणा गरे नाडाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी, को-को छन् प्यानलमा ?
अटो व्यवसायी करण चौधरीले नाडाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उनले बुधवार औपचारिक कार्यक्रममार्फत् प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
‘नाडाको गरिमा, व्यवसायीको साथ, बलियो संगठन, अटुट विश्वास’ भन्ने नारासहित उनले उम्मेदवारी घोषणा गरे ।
प्यानल घोषणा कार्यक्रममा नाडाका महासचिव सुनिल रिजालले कार्यसमितिको संख्या बढाएर १७ पुर्‍याइएको जानकारी दिए ।
यसअघि कार्यसमिति १४ सदस्य मात्रै रहने गरेका थिए ।
मंसिर २३ गते नाडाको निर्वाचन हुँदैछ । सदस्यहरूलाई सफल बनाउन काम गरिरहेको र त्यस्ता कार्यक्रम गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो टिमले जित्ने रिजालले दाबीसमेत गरेका छन् । नाडा निर्वाचनले २ वर्षे कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्नेछ ।
उम्मेदवार राजनबाबू श्रेष्ठले सकेसम्म अझै पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । चौधरी प्यानलमा सबै क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त टिम रहेको उनको दाबी छ ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका चौधरीले आफूले सबै क्षेत्रलाई समेटेर नाडामा उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए ।
चौधरीको सो–प्यानलमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो अनुभव बोकेका व्यवसायी देखि नयाँ युवा पुस्ताका समेत समेटिएका छन् ।
सम्पूर्ण अटो क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने चार पाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे, ब्याट्री, लुब्रीकेन्ट, टायर, स्पेयर पार्टस्, हेभिइक्युपमेन्ट, सवै क्षेत्रलाई समेटर टिम बनेको चौधरीले जनाएका छन् ।
‘म गर्वका साथ भन्छु, सक्षम नेतृत्वका लागि म अध्यक्ष पदको प्रत्यासी हुँ,’ उनले भने ।
भोट हाल्नु अगाडिसम्म सर्वसम्मतिको लागि वातावरण बनाउने उनको भनाइ छ ।
‘मैले जित्छु भन्ने अहमता होइन, विश्वास हो, सर्वसम्मतिका लागि अन्तिमसम्म पनि मैले प्रयास गर्नेछु,’ उनले भने ।
उनले मतदाताहरूलाई जानकारी दिनका लागि आज प्यानल घोषणा गरेको बताए । तर अन्तिमसम्म सहमति खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘मेरो टिम उद्योगमुखी हुनेछ, सबै क्षेत्रका उद्यमीहरूलाई टिममा समेटेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा युवाको खाँचो छ ।’
आज प्यानल घोषणा भए पनि कुन पदमा भन्ने भने खुलाइएको छैन ।
को–को छन् करण चौधरी प्यानलमा ?
सुरेन्द्र कुमार उप्रेती